Imisebenzi yeeNgqungquthela zeeKholeji zokuVunywa
Cinga ngokubanzi ngemisebenzi yakho xa usebenzisa isicelo kwiKholeji
Imisebenzi yangexesha elithile yinto nje into enikwenzayo engekho ikhosi ephakamileyo okanye umsebenzi ohlawulwayo (kodwa inqaku elihlawula amava omsebenzi linomdla kwiikholeji kwaye lingenza indawo yezinye izinto zangaphandle). Kufuneka uchaze imisebenzi yakho yexesha elide ngemigqaliselo ebanzi-abafakizicelo abaninzi benza impazamo yokucinga ngabo kuphela njengeqela elixhaswe zizikolo ezifana neencwadi zonyaka, ibhola okanye ibhola lebhola.
Ayikho njalo. Ininzi imisebenzi yasekuhlaleni nakwiintsapho nayo "i-extracurricular."
Yiyiphi Inqaku leeNgqungquthela?
Isicelo esiqhelekileyo kunye kunye neqela leqela leekholeji kunye kunye neenkonzo zentlalo kunye nomsebenzi wentlalo, umsebenzi wokuzithandela, imisebenzi yeentsapho kunye nezinto zokuzilibazisa. Iintlonelo ziluhlu oluhlukeneyo kuba zibona ukuphumelela, kungekhona umsebenzi owenziweyo. Uluhlu olungezansi lubonelela ngemimiselo yemisebenzi eya kuqwalaselwa "yecandelo elongezelelweyo" (phawula ukuba ezininzi zeentlobo ezingezantsi zihamba):
UbuGcisa : Iingingqi, umculo, umdaniso, ukudweba, ukufota, ukubhala nokubhala kunye neminye imisebenzi yokudala. Qaphela ukuba ezininzi iinkqubo zekholejini zikunika ukhetho lokuquka isampula yomsebenzi wakho wokudala nokuba ngaba yividiyo yeentsebenzo, isampula yokubhala yokudala, okanye iipotifoliyo zezixhobo zobugcisa ozidalileyo. UVanessa ubhala malunga nokuthanda kwakhe umsebenzi wezandla kwisicatshulwa sakhe soLwazi oluqhelekileyo.
Umsebenzi weCawa : Ukufikelela koluntu, ukunceda abantu abadala, izicwangciso zomcimbi, izidlo zasekuhlaleni, umculo oxhaswe yiCawa kunye neenkqubo zezemidlalo, ukufundisa okanye ukulungelelanisa iinkampu zasehlotyeni kunye nomsebenzi wobuvangeli, umsebenzi wezithunywa zevangeli kunye naluphi na umsebenzi owenzela icawa.
Iiklabhu : I-club ye-Chess, i-mathletes, ityala elihlekisayo, ingxoxo, i-animé club, iqela lokudlala indima, iiklabhu zolwimi, iqela lefilimu, iqela le-skateboarding, iindidi / amaqela amancinci njalo njalo.
Umsebenzi woluntu: indawo yokuzonwabisa yasekuhlaleni, ukulungiswa komcimbi, abasebenzi bamatye kunye neminye eminye imisebenzi ehlelwe ngommandla, kungekhona isikolo.
Ulawulo : Urhulumente wabafundi, ibhunga labafundi, ikomiti yokukhuthaza, ibhodi yolutsha loluntu (bona isicatshulwa sikaSophie ), iibhodi zeengcebiso kunye njalo.
Ukuzilibazisa : Yenza ubuchule apha. Funda la manqaku malunga nendlela iCube yeRubik okanye i- Collecting Free Stuff inokuguqulwa ngayo ibe yintsebenzo yechungechunge. Kwakhona, iikholeji zinomdla kwi-passion yakho ingaba i-rocketry, umzila wesitimela, ukuqokelela, ukubhuloza okanye ukukhupha. Ezi zinto zibonisa ukuba unomdla ngaphandle kweklasi.
Imidiya : umabonakude wendawo, umsakazo wesikolo okanye umabonwakude, abasebenzi bonyaka, iphephandaba lesikole, iphephabhali lokubhala, ukubhuloza kunye nokupapashwa kwe-intanethi, iphephandaba lendawo, kunye naliphi na umsebenzi okhokelela kumboniso weTV, i-movie okanye ukushicilelwa (kwi-intanethi okanye ukuprinta).
I-Military : I-ROTC ye-Junior, amaqela okubhola kunye nemisebenzi ehambelana nayo.
Umculo : I-Chorus, i-band (ukuhamba, i-jazz, i-symphonic, i-concert, i-pep ...), i-orchestra, i-ensembles kunye ne-solo. La maqela omculo angabakho esikolweni, ecaweni, kuluntu okanye kwiqela lakho lomntu okanye imizamo yodwa.
Ezemidlalo : Ibhola, i-baseball, i-hockey, umkhondo, i-gymnastics, umdaniso, i-lacrosse, ukubhukuda, ibhola lebhola, ukushushuluza, ukuvuselela nokunye okunjalo. Ukuba ungumdlali ophumelele kakhulu, qiniseka ukuba ukhangele kwiindlela zokuqesha eziphezulu zakho kwiikholeji ezikhethiweyo ekuqaleni kwenkqubo yokwamkelwa.
Umsebenzi Wokuzithandela kunye neNkonzo Yomphakathi : Iqela eliKhulu, indawo yokuHlaliswa koLuntu, ukufundisa kunye nokucebisa, ukukhutshwa kweengxowa-mali zoluntu, i-Rotary, ukufikelela kwecawa, umsebenzi wesibhedlele (ukukhwa kwamasila), umsebenzi wezonyango, umsebenzi wekhaya loongikazi, umsebenzi we-poll, isebe lomlilo wokuzithandela, ukudala ukuhamba iindlela, i-Adopt-a-Highway, kunye nayiphi na enye into ekunceda umhlaba kwaye ayikho inkokhelo.
Ukuba ufana nabafundi abaninzi kwaye ubambe umsebenzi owenza kube nzima kuwe ukuba wenze imisebenzi emininzi yangaphandle, ungakhathazeki. Iikholeji kwaye uyayiqonda le ngxaki, kwaye ayiyi kusebenza ngokusesikweni. Funda oku apha apha: Iikholeji ezi-5 njengezicelo Abafaki-zicelo abaneZenzo zoLwazi.
Abafundi abaninzi bandibuza ukuba zeziphi ezi zinto ziza kubakhokelela kakhulu kwiikholeji, kwaye inyaniso kukuba naluphi na onako.
Impumelelo yakho kunye nokujongwa kokubandakanyeka kungaphezulu komsebenzi ngokwawo. Ukuba imisebenzi yakho yangaphandle ibonisa ukuba unomdla malunga nento ngaphandle kweklasi, ukhethe imisebenzi yakho kakuhle. Ukuba babonisa ukuba ufezekile, konke kulunge.
Unokufunda ngakumbi kweli nqaku: Ziziphi izinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo? Umgca, nangona kunjalo, kukungcono ukuba ube nobunzulu kunye nobunkokheli kwimisebenzi emibini okanye emibini kunokuba uphazamise ngokukodwa imisebenzi emibini. Zibeke ezicathulweni zeofisi yokumkelwa: bafuna abafundi abaza kuncedisa ekomidini yoluntu kwiindlela ezinentsingiselo. Ngenxa yoko, izicelo eziqinileyo zibonisa ukuba umenzi wesicelo uzibophezele kumsebenzi ngendlela enentsingiselo.
Babe Ruth Ubeka Ingxelo Yasekhaya Yasekhaya Yonyaka (1927)
Iphupha njengeSakhiwo esichazayo kwiLwandle lwaseSargasso